OEM Peristaltic saar Warshad - Shiinaha OEM Peristaltic saar soo saarayaasha, shirkado cusub
Hordhac Bambada Peristaltic ee ka timaada mootada 57 stepper oo leh qalab koronto oo ka kooban cabir yar, qaab dhismeedka fudud ee badeecada wadista bamka peristaltic. Badanaa qalabka, qalabka, taageerida adeegsiga noocyada kala duwan ee mashiinka mashiinka ayaa loo isticmaali karaa si loo gaaro soosocodka soo socda ee 1140mL / min. By isticmaalaha mootada stepper wadista tooska ah si loo xakameeyo habka shaqada, iyadoo la adeegsanayo sagxadda, ku rakibidda guddi waafaqsan. Waxyaabaha Nalalka Shay Item Paramenters Xawaaraha Gawaarida （DGpump ayuu ...
Hordhac Bamka Peristaltic ee madaxa mashiinka micro-WX10-14 oo leh mootada 42 stepper oo ka kooban cabbir yar, qaab dhismeed fudud oo badeecada bamka peristaltic ah. Badanaa qalabka, qalabka taageeraya isticmaalka 24mL / min si loo gaaro gudbinta dareeraha soo socda. Si toos ah ayaa loo kaxeeyaa mootada stepper-ka si loo xakameeyo hannaanka shaqada, isticmaalka dabaqa ama rakibidda guddiga, waana loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha rakibidda sheyga. Halbeegyada ★ Xawaaraha Gawaarida ...
Hordhac OEMQS100-01 / WX10-14 / 18 bamka peristaltic ayaa lagula taliyay xawaaraha ugu badan ee 100rpm; ku qalabaysan mashiinka micro-pump, oo ku habboon dhumucda gidaarka 0.8 ilaa 1.0mm tuubbo, hal-marin afar-lugood ah ama sideed-wheel. Toos u wadida isticmaalaha mootada stepper-ka ah ee 42-ka ah, isticmaalka rakibaadda jilicsan ee isku-xidhka, oo loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha. Badanaa qalabka, qalabka taageeraya isticmaalka 38mL / min si loo gaaro gudbinta dareeraha soo socda. Halbeegyada Motor s ...
Halbeegga Moodalka Xawaaraha Gawaarida (rpm) Mashiinka Awooda Korantada Xawaaraha Xawaaraha Noloshiisa Ku Haboon Qoyaanka OEMMA2.5-01 2.5 AC MOTOR AC 220V / 14W ≤10% 1800 saacadood 0-40 ℃ ＜ 80% OEMMA3.8-01 3.8 OEMMA5-01 5 OEMMA7.5-01 7.5 OEMMA10-01 10 OEMMA12-01 12 OEMMA15-01 15 OEMMA20-01 20 OEMMA25-01 25 OEMMA30-01 30 OEMMA40-01 40 OEMMA50-01 50 OEMMA60-01 60 OEMMA80-01 80 OEMMA0 11 ...
Sharaxaadda alaabta waxay ka kooban tahay madaxa bamka JY15, mootada tallaabada 42 iyo guddiga wareegga Drive. Muga waa yar yahay, Rakibaadda la daadiyay. loo adeegsaday qalabka shaybaarka, Qalabka Falanqaynta. Xuduudaha farsamada: Awoodda: DC12V Xawaaraha xawaaraha: 0 -100rpm, Xawaaraha la hagaajin karo: Bedelka hagaajinta gacanta, Xakamaynta Dibadda si loo xakameeyo xawaaraha kala duwan. Xaqiijinta xawaaraha ； 5 rpm / min Tuubbada Laheli Karo: 25 #, 17 # Max heerka socodka la tixraacay: 170ml / min Xakamaynta Dibadda Nooca: 0-5V, 4-20Ma, 0-10Khz Qiyaasta: 130 * 73 * ...
Hordhac Darawal taxane ah oo OEM100J ah oo uu ka kooban yahay 57 matoor stepper oo u dhigma habab kala duwan oo xakamayn ah si loo sameeyo qaab dhismeed yar, fudud, xakamaynta fudud ee khadka wax soo saarka mashiinka baaburka. Badanaa qalabka, qalabka taageeraya isticmaalka 380mL / min si loo gaaro gudbinta dareeraha soo socda. DIP ku beddelashada habka xakamaynta calaamadaha dibadda, calaamadaha dibadda ee ikhtiyaar u ah 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz, waxayna ku siin karaan adeegsiga alaabooyinka xakamaynta isgaarsiinta RS485. Isticmaalka ...
Hordhac OEMQS100-01 / WX10-14 / 18 bamka peristaltic ayaa lagula taliyay xawaaraha ugu badan ee 100rpm; ku qalabaysan mashiinka micro-pump, oo ku habboon dhumucda gidaarka 0.8 ilaa 1.0mm tuubbo, hal-marin afar-lugood ah ama sideed-wheel. Toos u wadida isticmaalaha mootada stepper-ka ah ee 42-ka ah, isticmaalka rakibaadda jilicsan ee isku-xidhka, oo loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha. Badanaa qalabka, qalabka taageeraya isticmaalka 38mL / min si loo gaaro gudbinta dareeraha soo socda. Halbeegyada Moto ...
Hordhac Waxay leedahay wadista gawaarida AC, bilowga awoodda amniga, madaxa bamka leh guga; qaab-dhismeed fudud, is-waafajin tubbada; keena xawaare go'an iyo xaddiga socodka xasiloonida Farsamada rem Awood: 220V AC / 55mA ， 50 / 60Hz ama 110V AC / 110mA ， 50 / 60Hz control Xakamaynta xawaaraha go'an: 15 nooc oo xawaare ah ayaa loo heli karaa xakamaynta gudaha, 2.5, 3.8, 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 110rpm error Khaladka xawaaraha: ± 10% direction Jihada howlgalka: CW ● Bilow capacitor: kaaliyaha amniga ● Awood: 14W ● ...
Faahfaahinta alaabta waxay ka kooban tahay madaxa Bambooyin KZ25 iyo Mashiinka Tooska ah ee Tooska ah. Waxbarid fudud. Waxaa loo adeegsaday isku dheelitirka qalabka warshadaha. Halbeegyada Farsamada: Awooda: DC 12V. Xawaaraha: xawaaraha wareega ee go'an, wuxuu dooran karaa xawaare kala duwan. Max heerka tixraaca socodka: 1200ml / min tubbada la heli karo: 15 #, 24 #, 35 #, 36 #. Aragti: 275 * 122 * 128 (mm)